Wholesale Yakavhenganiswa Mubhedha Resin Mugadziri uye Mutengesi | Dongli
Dongli yakagadzirira kushandisa yakavhenganiswa mabhedhi resini akanyatsogadzirirwa mhando yepamusoro resini misanganiswa yakagadzirirwa kunatsa mvura. Iyo reshiyo yezvinhu resini inogadzirwa kuti ipe yakakwira chinzvimbo. Kuitwa kweiyo yakagadzirira kushandisa yakavhenganiswa mubhedha resin kunoenderana nechishandiso. Dzakati wandei dzevhenganiswa mabhedhi resini anowanikwa nezviratidzo izvo zvinorerutsa kushanda kana chiono chiri nyore chekutaridza kuneta kuchidikanwa.
Yakasanganiswa Bed Resins
Resins Fomu Yemuviri uye Chitarisiko Maumbirwo RinoshandaBoka Ionic Fomu Yese Shanduro Kugona meq / ml Mhepo Yemukati Kutendeuka kwaIon Vhoriyamu Ratio Kutumira Kurema g / L Kuramba
MB100 Bvisa Spherical Beads Gel SAC R-SO3 H+ 1.0 55-65% 99% 50% 720-740 > 10.0 MΩ
Gel SBA R-NCH3 OH- 1.7 50-55% 90% 50%
MB101 Bvisa Spherical Beads Gel SAC R-SO3 H+ 1.1 55-65% 99% 40% 710-730 > 16.5 MΩ
Gel SBA R-NCH3 OH- 1.8 50-55% 90% 60%
MB102 Bvisa Spherical Beads Gel SAC R-SO3 H+ 1.1 55-65% 99% 30% 710-730 > 17.5 MΩ
Gel SBA R-NCH3 OH- 1.9 50-55% 95% 70%
MB103 Bvisa Spherical Beads Gel SAC R-SO3 H+ 1.1 55-65% 99% 1 * 710-730 > 18.0 MΩ *
Gel SBA R-NCH3 OH- 1.9 50-55% 95% 1 *
MB104 Bvisa Spherical Beads Gel SAC R-SO3 H+ 1.1 55-65% 99% Inner Kuchenesa Mvura Kurapa
Gel SBA R-NCH3 OH- 1.9 50-55% 95%
Mashoko omuzasi * Heino zvakaenzana; Kufuridzira sukurudza mhando yemvura:> 17.5 MΩ cm; TOC <2 ppb
Mvura yakanakisa yemubhedha yakasanganiswa nebhedhi inoumbwa neiyo gel mhando yakasimba acid cation yekutsinhana nebwe uye yakasimba alkali anion yekutsinhana nebwe, uye yakagadziridzwa uye yakagadzirira yakavhenganiswa.
Inonyanya kushandiswa mukunatsa kwakananga kwemvura, kugadzirirwa kwemvura yakachena yeindasitiri yemagetsi, uye inotevera mubhedha wakasanganiswa wakanaka kurapwa kwemamwe marapirwo emvura. Iyo inokodzera nzvimbo dzakasiyana siyana dzekurapa mvura dzine mvura yakakwira yakasviba uye isina mamiriro ekumusoro-soro, senge michina yekuratidzira, karukureta dhisiki, CD-ROM, chaiyo bhodhi redunhu, zvigadzirwa zvemagetsi zvakasarudzika uye zvimwe zvakaringana zvigadzirwa zvemagetsi indasitiri, mushonga uye kurapwa, cosmetics indasitiri, chaiyo machining indasitiri, nezvimwe
Kushandiswa kwezviratidzo zvinoratidza
1, pH renji: 0-14
2. Tembiricha inotenderwa: sodium mhando ≤ 120, hydrogen ≤ 100
3, kuwedzera mwero%: (Na + kusvika H +): ≤ 10
4. Industrial resin dura kukwirira M: ≥ 1.0
5, yekumutsiridza mhinduro yevasungwa%: nacl6-10hcl5-10h2so4: 2-4
6, regenerant dosage kg / m3 (maindasitiri chigadzirwa zvinoenderana ne100%): nacl75-150hcl40-100h2so4: 75-150
7, kuvandudzwa kwemvura kuyerera mwero M / h: 5-8
8, yekumutsiridzwa yekuonana nguva m inute: 30-60
9, kusuka yekuyerera rate M / h: 10-20
10, yekuwacha miniti yenguva: ingangoita makumi matatu
11, inoshanda kuyerera chiyero M / h: 10-40
12, kushanda chinzvimbo chinzvimbo mmol / L (nyorova): kumutswazve kwemunyu ≥ 1000, hydrochloric acid kugadziriswazve ≥ 1500
Wakavhenganiswa mubhedha nebwe inowanzoshandiswa mukushambidzwa kwemvura indasitiri yekukorobha nzira yemvura kuzadzisa demineralization yemhando yemvura (senge mushure mekuchinja osmosis system). Zita remubhedha wakasanganiswa rinosanganisira yakasimba asidi cation yekutsinhana resin uye yakasimba base anion yekutsinhana resin.
Basa reMixed Bed Resin
Deionization (kana demineralization) inongoreva kubviswa kweion. Ion inobhadhariswa maatomu kana mamorekuru anowanikwa mumvura ane net net negative kana yakanaka mhosva. Kune akawanda mafomu anoshandisa mvura seanoshenesa mumiriri kana chinhu, aya maoni anoonekwa seasina kuchena uye anofanira kubviswa mumvura.
Ion inobhadhariswa zvakanaka inonzi cations, uye maiyoni anechaji isina kunaka anonzi anion. Ion exchange resin inoshandura cations isingadiwe uye anions ine hydrogen uye hydroxyl kugadzira mvura yakachena (H2O), isiri ion. Izvi zvinotevera runyorwa rweyakawanda ions mumvura yemasipareti.
Kushanda Musimboti weMuvhenganiswa Mubhedha Resin
Musanganiswa wemabhedha resini anoshandiswa kugadzira deionized (demineralized kana "Di") mvura. Aya ma resini madiki epurasitiki mabheji anoumbwa nemakemikari epolymer maketani ane akachajiwa mashandiro emapoka akaiswa mumabheji. Boka rega rega rinoshanda rine yakatarwa yakanaka kana yakaipa muripo.
Cationic resin ane asina kunaka mashandiro emapoka, saka ivo vanokwezva zvinechaji chayoni ion. Kune maviri marudzi ekasi resini, isina simba acid cation (WAC) uye yakasimba acid cation (SAC). Weak acid acid cation resin inowanzo shandiswa kune dealkalization uye mamwe akasarudzika mashandiro. Naizvozvo, isu ticha tarisa pane iro basa reakasimba acid cation resin inoshandiswa mukugadzira kwemvura yakasviba.
Anionic resin ane akanaka anoshanda mapoka uye nekudaro inokwezva zvisina kunaka maoni. Kune mhando mbiri dzeanion resin; Yakadzika isina anion (WBA) uye yakasimba base anion (SBA). Ose marudzi eaya anionic resin anoshandiswa mukugadzira mvura yakasviba, asi ane zvinotevera hunhu hwakasiyana:
Kana ichishandiswa mune yakavhenganiswa mubhedha system, WBA resin haigone kubvisa silika, CO2 kana ine kugona kudzikisira isina kusimba acids, uye ine pH yakaderera pane kwazvakarerekera.
Iyo yakavhenganiswa mubhedha resin inobvisa anion ese ari pamusoro tafura, kusanganisira CO2, uye ine yakakwira kupfuura kwazvakarerekera pH painoshandiswa mune mbiri mbiri yakazvimiririra yemubhedha system nekuda kwekudonha kwesodium.
Sac uye SBA Resins Anoshandiswa Mune Akavhenganiswa Mubhedha.
Kuti igadzire deionized mvura, iyo cation resin inogadziriswazve nehydrochloric acid (HCl). Hydrogen (H +) inokwenenzverwa, saka inozvinamatira kune yakashata yakachinja cationic resin marozari. Iyo anion resin yakagadzirwazve neNaOH. Hydroxyl mapoka (OH -) anopomerwa zvisina kunaka uye anozvisungirira kune chaicho chakachajiwa anionic resin marozari.
Ions dzakasiyana dzinokwezva kune resin mabheji ane simba rakasiyana. Semuenzaniso, calcium inokwezva cationic resin mabheji zvakanyanya kusimba kupfuura sodium. Iyo hydrogen pane iyo cationic resin marozari uye iyo hydroxyl pane anionic resin marozari haana kukwezva kwakasimba kumabhero. Ichi chikonzero nei ion kuchinjanisa ichibvumidzwa. Kana iyo chaiyo inobhadharwa cation ichiyerera nepakati peiyo cationic marozari, iyo cation kuchinjana ihydrogen (H +). Saizvozvowo, apo anion ine muripo wakashata inoyerera kuburikidza neayo anion resin marozari, anion inopanana nehydroxyl (OH -). Paunobatanidza hydrogen (H +) nehydroxyl (OH -), unogadzira H2O yakachena.
Chekupedzisira, nzvimbo dzese dzekutsinhana pane iyo kation uye anion resin mabheji anoshandiswa kumusoro, uye iyo tangi haichaburitse deionized mvura. Panguva ino, mabheji eresin anofanirwa kugadziriswazve kuti ashandiswe zvakare.
Sei uchisarudza yakavhenganiswa mubhedha resin?
Naizvozvo, angangoita maviri marudzi eion exchange resin anodikanwa kugadzirira ultrapure mvura mukurapa kwemvura. Imwe resin ichabvisa ioni dzakabhadharwa uye imwe ichabvisa maiyoni asina kubhadharwa.
Mune yakavhenganiswa mubhedha system, cationic resin inogara iri munzvimbo yekutanga. Kana iyo manisiparati mvura inopinda mutangi izere necation resin, ese akanaka ane mhosva macations anokwezva necation resin marozari uye achinjaniswa nehydrogen. Iwo anion anechaji isina kunaka haazokwezve uye kupfuura nepakati pecationic resin marozari. Semuenzaniso, ngatitarisei calcium chloride mumvura yekudya. Mune mhinduro, calcium ions inokwenenzverwa uye inozvinamatira kune iyo cationic hura kuti ibudise hydrogen ions. Chloride inechaji isina kunaka, saka haizvinamise kune iyo cationic resin marozari. Hydrogen ine yakanaka mutero inonamira pachayo kune chloride ion kuti igadzire hydrochloric acid (HCl). Mvura inoyerera kubva pasac exchanger ichave neepH yakaderera uye neakanyanya kuitisa kupfuura inouya mvura yekudya.
Mvura inoyerera yecationic resin inoumbwa neakasimba asidi uye isina simba asidi. Ipapo, iyo acid acid inopinda mutangi izere ne anion resin. Anionic resin inokwezva anoni ane mhosva dzakadai secloride ions uye nekuchinjanisa nemapoka ehydroxyl. Mhedzisiro yacho hydrogen (H +) uye hydroxyl (OH -), iyo inoumba H2O
Muchokwadi, nekuda kwe "sodium leakage", iyo yakavhenganiswa mubhedha system haizogadzi chaiyo H2O. Kana sodium ichidonha kuburikidza nekati yekutsinhana tangi, inosangana nehydroxyl yekuumba sodium hydroxide, iyo ine yakakwira conductivity. Sodium leakage inoitika nekuti sodium nehydrogen zvine kukwezva kwakangofanana kune cationic resin marozari, uye dzimwe nguva ion ioni haitsinhanise mahydrogen ions ivo pachavo.
Mune yakavhenganiswa mubhedha system, yakasimba acid cation uye yakasimba base anion resin inosanganiswa pamwechete. Izvi zvinobudirira zvinoita kuti tangi yemubhedha yakavhenganiswa ishande sezviuru zvezvikamu zvakasanganiswa zvemubhedha mutangi. Iko kesheni / anion kuchinjaniswa kwakadzokororwa mumubhedha weresin. Nekuda kwenhamba yakakura yekudzokororwa kation / anion kuchinjana, dambudziko rekudonha kwesodium rakagadziriswa. Nekushandisa mubhedha wakasanganiswa, unogona kugadzira yemhando yepamusoro deionized mvura.
Pashure: Yakasimba acid cation yekuchinjana resin
Zvadaro: Inert uye Polymer mabheji
MA-407 Arsenic Sarudzo Resin
Inert uye Polymer mabheji
MA-202U (Macroporous Yakasimba-Base Anion Shanduko ...